OGEYSIISKAN wuxuu qeexayaa sida ay u dhici karto in loo ISTICMAALO IN LA ISTICMAALO OO LAGU SOO bandhigi karo iyo sida aad ku heli karto helitaanka macluumaadkan.
FADLAN SI AAD U FIIRSAN
Waxaa nalooga baahan yahay sharci ahaan inaan ilaalino asturnaanta macluumaadkaaga caafimaad ee dhawrsan, si aan kuu ogeysiino waajibaadkayada sharciga ah iyo dhaqamada asturnaanta ee la xiriira macluumaadkaaga caafimaadka, iyo inaan u sheegno shaqsiyaadka ay khusayso ka dib jebinta macluumaadka caafimaadka aan la hubin. Ogaysiiskani wuxuu soo koobayaa waajibaadkayaga iyo xuquuqdaada ku saabsan macluumaadkaaga oo si buuxda ugu qeexan 45 CFR Qaybta 164.
1. Adeegsiga iyo Shaacinta Waxaan Sameyn Karnaa Iyadoo aan La Siinin Ogolaansho Qoraal ah
Waxaan u isticmaali karnaa ama shaaca uga qaadi karnaa macluumaadkaaga caafimaad ujeedooyin gaar ah iyadoon lagaa haysan oggolaansho qoraal ah, oo ay ku jiraan kuwa soo socda:
Daaweynta: Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno ama u siidino macluumaadkaaga ujeeddooyin la xiriira daaweyntaada. Waxaa laga yaabaa inaan u siino macluumaadkaaga bixiye daryeel caafimaad kale si ay kuu daaweeyaan; xusuusinta ballanta; ama si loo bixiyo macluumaad ku saabsan daaweynta kale ama adeegyada aan bixinno.
Payment: Waxaan u isticmaali karnaa ama shaaca ka qaadi karnaa macluumaadkaaga si aan ugu helno lacag bixinta adeegyada lagu siiyo.
Hawlgallada Daryeelka Caafimaadka: Waxaan u isticmaali karnaa ama u siideyn karnaa macluumaadkaaga waxqabadyada qaarkood ee lagama maarmaanka u ah ku shaqeynta xarunteenna iyo hubinta in bukaankeennu helaan daryeel tayo leh. Tusaale ahaan tababarka shaqaalahayaga.
Isticmaalada kale ama Shaacinta: Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa ama u siideyn karnaa macluumaadkaaga qaar kale, sharciyo / xeerar ku habboon, oo ay ku jiraan:
Si looga fogaado khatar weyn oo ku timaadda caafimaadkaaga ama amnigaaga ama caafimaadka ama badbaadada dadka kale.
Sida uu farayo sharciga gobolka ama federaalka sida soo tebinta xadgudub, dayacaad ama dhacdooyin kale oo gaar ah.
Sharciyada magdhowga shaqaalaha ama waxqabadyada caafimaadka bulshada qaarkood sida ka warbixinta cudurrada qaarkood.
Hawlaha korjoogteynta caafimaadka bulshada qaarkood sida xisaabaadka, baaritaannada, ama ficillada shatiyeynta.
Iyadoo laga jawaabayo amar maxkamadeed, waaran ama yeeris maxkamadeed oo ku saabsan dacwadaha garsoorka ama maamulka.
Hawlaha gaarka ah ee dawladda sida militariga ama xarumaha dhaqan celinta.
Ujeeddooyin cilmi baaris ah haddii shuruudaha qaarkood lagu qanco.
Iyada oo laga jawaabayo codsiyada qaarkood ee ay fuliyaan sharci fulinta si loo helo baxsad, dhibbane ama markhaati, ama loo soo sheego geerida ama dambiyada qaarkood.
Kuwo baarayaasha, agaasimayaasha aaska, ama ururada soo iibinta xubnaha.
2. Shaacinta Waxaan Sameyn Karnaa Ilaa Aad Diidid
Waxaa laga yaabaa inaan shaaca uga qaadno macluumaadkaaga sida hoos lagu sharaxay.
Xubin qoyskaaga ah, ehelkaaga, saaxiibkaa, ama qof kale oo ku lug leh daryeelkaaga caafimaad (oo lagu daray ogolaanshahaaga wada xiriirka) ama bixinta daryeelkaaga caafimaad. Waxaan ku soo koobi doonnaa shaacinta macluumaadka la xiriira kaqeybgalka qofkaas ee daryeelkaaga caafimaad ama bixintaada.
Si loo ilaaliyo diiwaanka xaruntayada. Haddii qof ku weydiiyo magac ahaan, waxaan kaliya shaaca ka qaadi doonnaa magacaaga, xaaladdaada guud, iyo goobta ay ku taal xaruntayada. Waxaan sidoo kale u sheegi karnaa diintaada wadaadada.
3. Adeegsiga iyo Shaacintaada Oggolaanshahaaga Qoraalka ah
Adeegsiga kale iyo bandhigyada aan lagu qeexin Ogeysiiskan waxaa lagu sameyn doonaa oo keliya oggolaanshahaaga oo qoraal ah, oo ay ku jiraan inta badan isticmaalka ama soo bandhigidda qoraallada cilminafsiga; ujeeddooyinka suuqgeynta badankood; ama haddii aan dooneyno inaan iibino macluumaadkaaga. Waad la noqon kartaa oggolaanshahaaga adoo u soo gudbinaya ogeysiis qoraal ah Xiriirka Asturnaanta ee hoos lagu aqoonsaday. Kala noqoshada ma noqon doonto mid wax ku ool ah illaa iyo inta aan tallaabada hore ku qaadnay ku tiirsanaanta oggolaanshaha.
4. Xuquuqdaada Ku Saabsan Macluumaadkaaga Caafimaadka ee La Badbaadiyay
Waxaad leedahay xuquuqaha soo socda ee khuseeya macluumaadkaaga caafimaadka. Si aad u adeegsato mid ka mid ah xuquuqdan, waa inaad u soo gudbisaa codsi qoraal ah Sarkaalka Asturnaanta ee hoos ku xusan.
Waxaad codsan kartaa xayiraad dheeri ah oo ku saabsan adeegsiga ama bixinta macluumaadka ee daaweynta, bixinta ama howlaha daryeelka caafimaadka. LAGAGAama baahna inaan ogolaano xayiraada la codsaday marka laga reebo xaalada xadidan ee adiga ama qof adiga ku matalaya uu ku bixinayo wax ama adeeg, waxaadna codsatay in macluumaadkaas aan loo sheegin caymiska caafimaadka.
Waxaan sida caadiga ah kula soo xiriiri karnaa taleefan ama boostada cinwaanka gurigaaga. Waxaad codsan kartaa inaan kula soo xiriirno qaabab kale ama meelo kale. Waanu waafajin doonnaa codsiyo macquul ah.
Waxaad baari kartaa oo aad heli kartaa nuqul diiwaanada loo isticmaalay in go'aan looga gaaro daryeelkaaga ama bixinta daryeelkaaga, oo ay ku jiraan nuqul elektaroonig ah. Waxaa laga yaabaa inaan kaa qaadno khidmad macquul ah oo ku saleysan bixinta diiwaanka. Waxaad codsan kartaa in macluumaadkaaga caafimaadka ee dhawrsan wax laga beddelo. Waxaan u diidi karnaa codsigaaga sababo jira awgood, tusaale ahaan, haddii aanan abuurin diiwaanka haddii aan go'aansanno inuu diiwaanka sax yahay oo dhameystiran yahay.
Waxaa laga yaabaa inaad hesho xisaab-bixin ku saabsan shaac-bixinno gaar ah oo aan ka sameynay macluumaadkaaga caafimaad ee la ilaaliyo.
Waxaad heli kartaa nuqul warqad ah oo ah Ogeysiiskan. Waxaad xaq u leedahay xittaa haddii aad ogolaatay inaad ku hesho ogeysiiska si elektaroonig ah.
5. Isbedelada Ogaysiiskan
Waxaan xaq u leenahay inaan bedelno shuruudaha Ogeysiiskan waqti kasta, iyo inaan ka dhigno Ogeysiiska cusub mid waxtar u leh dhammaan macluumaadka caafimaadka ee ilaalinayno. Haddii aan si macno ahaan ah u badalno dhaqamadeena asturnaanta, waxaan ku dhejin doonnaa nuqul Ogeysiiska hadda ah aagga soo dhaweynta iyo boggayaga internetka. Waxaad nuqul Ogeysiiska ah ka heli kartaa soo dhoweyntayada ama Sarkaalka Asturnaanta.
Waad noo caban kartaa annaga ama Xoghayaha Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha haddii aad aaminsan tahay in lagu xadgudbay xuquuqdaada gaarka ah. Waxaad cabasho qoraal ah noogu soo gudbin kartaa adoo ogeysiinaya Sarkaalkayaga Khaaska ah. Kama aargudan doonno cabashadaada.
7. Macluumaadka xiriirka
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Ogaysiiskan, ama haddii aad rabto inaad diiddo ama aad ka cabato wax ku saabsan adeegsi ama bandhig ama jimicsi wixii xuquuq ah sida kor lagu sharaxay, fadlan la xiriir:
Sarkaalka Asturnaanta: Betsy Hackett
Cinwaanka: 921B Jasonway Ave Columbus, OH 43214
8. Taariikhda Dhaqan galka ah
Ogaysiiskani wuxuu dhaqan galayaa Sebtember 16, 2013.